प्रधानन्यायाधीश गएनन् बैठकमा, प्रधानमन्त्री ओली तनावमा ! « Ok Janata Newsportal
प्रधानन्यायाधीश गएनन् बैठकमा, प्रधानमन्त्री ओली तनावमा !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ ।
११ वटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेका ३८ जनाको नियुक्ति ४५ दिन नाघिसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएका थिए । उनले बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक मार्फत् ३८ जनालाई नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेका थिए ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले प्रधानमन्त्रीको पस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धा चलिरहेका बेला यो समयमा बैठक बस्नु उचित नभएकाले प्रधानन्यायाधीश राणा बैठकमा उपस्थित नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
अब, परिषद्को बैठक अन्योल भएको छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्का पाँचजना मध्ये ४ जनाको उपस्थितिमा मात्रै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो तर, प्रधामन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर बहुमतबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए ।
नियुक्त सिफारिस भएका ३८ जनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।